Izinwele ezimfutshane emacaleni kwaye zinde ngaphezulu kumadoda | Amadoda aQinisekileyo
Izinwele zamadoda: Zifutshane kumacala kwaye zide phezulu
UMiguel Serrano | | Ukunyamekela, Isitayile esinenwele
Akukho zinwele zifutshane emacaleni kwaye zinde phezulu. Kukho iinwele ezahlukileyo ezisebenzisa le ngcaciso ichaziweyo, intofontofo kunye nobudoda..
Ezi zilandelayo iinketho ekufuneka uziqwalasele Ukuba ufuna ukucaciswa ngakumbi kwixesha elizayo xa ubuza umchebi wakho ngento emfutshane emacaleni kwaye ubude ngaphezulu.
1 Ukucheba iinwele
1.1 Kwenziwa njani?
1.2 Izinketho zeenwele
2 Inkundla yomkhosi
2.1 Kwenziwa njani?
3.1 Kwenziwa njani?
3.2 Izinketho zeenwele
Yeyona inwele ifutshane ithandwayo emacaleni kwaye inde ngaphezulu kwako konke. Ayimangalisi loo nto, kuba iingenelo zayo azimbalwa.
Ngokubanzi, ukuphela kweenwele kuqalwa ngokusika amacala kunye nokufutshane. Ukuqala kwithambo le-occipital, zonke iinwele ngokuthe ngcembe ziya zisiba nde njengoko sinyuka ngogebhezi. Umahluko phakathi kweendawo ezahlukileyo zokusika kufuneka ube mpuluswa. Inokwenziwa ngesikere kunye neenwele ezisikiweyo.
Ukugcinwa kufuneka kwenziwe rhoqo kwiiveki ezi-2-4.
Ukuba ubheja kule nwele, unokukhetha okuninzi xa udibanisa umphezulu:
Ngokwendalo lolona ncedo lukhulu lokucheba iinwele. Ngale ndlela, lukhetho oluhle kakhulu ukuba, ngenxa yomsebenzi wakho okanye ukhetho lwakho nje, ufuna iinwele zakho ukuba zingatsali ingqalelo engaphezulu kunokuba iyimfuneko.
Ayinamsebenzi ukuba ukubulawa komchebi akunasiphako. Ukuba iinwele azihambelani kakuhle nobume bobuso bakho, akukho nto unokuyenza. Ngale ndlela, ukuphela kuyabheja ngokukhuselekileyo, ukusukela oko isebenza ngokubanzi kubo bonke abantu.
Inokuguquguquka okukhulu. Unokwenza ngokwezifiso phantse kangangoko ufuna, ukusuka kubude (bunokunxitywa bobabini bufutshane kakhulu kwaye bude) ukuya kwisitayile, ngokuphakama kwethambeka.
Baninzi abantu abangafuniyo ukunikezela okwesibini ngaphezulu kunokuba kunyanzelekile ukuba balungise iinwele zabo, ngakumbi kusasa. I-gradient kukucheba iinwele ezifanelekileyo malunga noku kuba kuthatha ixesha elincinci ukuhlamba, ukomisa kwaye ulimise ngendlela elifunekayo.
Inkundla yomkhosi inokubhekisa kwiinkundla ezininzi. Apha sichaza eyona inokuthi ichonge kwilizwe lomkhosi: i-ultrashort.
Le nwele imfutshane emacaleni kwaye inde ngaphezulu ku indawo ephakathi phakathi kwe-mohicans kunye nentloko echetyiweyo. Isicoci seenwele sidluliswa ngenani eliphantsi kakhulu (ngesiqhelo ngu-0-0.5) phantse yonke intloko.
Liqhezu elincinci kuphela lendawo ephezulu elishiyiweyo lingasitywanga. Eli nxalenye lishiyeke ixesha elide kancinci kunezinye, nangona kufuneka lisikwe lifutshane kakhulu. Ungahlengahlengisa i-clipper phakathi kwe-1 kunye ne-5 ngokuxhomekeke kukhetho lwakho.
I-gradient iyakhethwa, kodwa into engenakuxoxwa kukuphakama kwamacala. Ukufumana ubume bayo umgca weetempile ufuna ukunyuka kakhulu, eyahlula iindawo ezimbini zokusika.
Ukugcinwa kufuneka kwenziwe rhoqo kwiiveki ezi-2-3.
Ukusikwa komkhosi kusindisa ixesha elininzi phambi kwesipili, kuba awuyidingi ikama okanye izilungisi. Kuphuma ebhedini kwaye ngokukhawuleza kulungele ukuphuma ngaphandle. Kungoko kunjalo iinwele ezisebenzayo.
Kukucheba okufutshane emacaleni kwaye kubude obuphezulu obuphezulu kugxininisa iimpawu zobuso. Ukuba ujonge ubudoda kunye neziphumo ezinzima ngokuqinisekileyo lukhetho olunokuthi luthathele ingqalelo.
Ifashoni kakhulu. Kwiminyaka yakutshanje, iqhutywe ngabalinganiswa abapholileyo kwifilimu nakumabonwakude, kubandakanya 'i-Peaky Blinders' okanye uJon Hamm kwifilimu yesenzo 'Umqhubi womntwana'.
Njengakule mibini idlulileyo, uqala ngokusika i-nape kunye namacala amafutshane okanye amafutshane kakhulu. Nangona kunjalo, apha kufunwa ukuba kukho umahluko omkhulu phakathi kwamacala nangaphezulu. Kule nto, icandelo eliphezulu lishiye liphakathi okanye lide.
Njengokunqunyulwa komkhosi, nokuba ungayibandakanyi i-gradient ixhomekeke kukhetho lwakho. Cinga ngayo ukuba ufuna ukongeza ukubamba okungaphantsi kunenwele yakho engaphantsi.
Ukugcinwa kufuneka kwenziwe rhoqo kwiiveki ezi-2-5.
I-undercut ihlala ikanywa kwakhona. Inxalenye engaphambili ihlala inikwa ivolumu, nangona ingabalulekanga. Unokukhetha ezinye iindlela, ezinje ngezi zilandelayo:
Ukuchetywa kweenwele isebenza kakuhle ngokumangalisayo neendevu. Ukuba ukhule ngeenwele zobuso, le nwele yenye yezona zinto zilungileyo unokuzinika.
Ukwenza i-undercut kulula kakhulungakumbi ixesha lokuqala, ngokufuthi awudingi ukubamba ngaphezulu kakhulu. Kwanele ukuhambisa isiklipthi seenwele emacaleni kunye nentamo yentamo kwinani elikhethiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Izinwele zamadoda: Zifutshane kumacala kwaye zide phezulu
Iinwele zale mihla zamadoda